महोत्तरीमा बिहे गरेर दिएकी छोरी कता हराइन्? माइती पक्ष भन्छ ‘ज्वाई पक्षले शव गायव गरे’ – Nayabook
महोत्तरीमा बिहे गरेर दिएकी छोरी कता हराइन्? माइती पक्ष भन्छ ‘ज्वाई पक्षले शव गायव गरे’
महोत्तरीको लोहारपट्टि नगरपालिका–७ भ्रमर पुरा गाउँबाट एक महिला विगत १७ दिनदेखि बे प त्ता छिन् । स्थानीयवासी मुकेश ठाकुरकी पत्नी २६ वर्षीया सुजिता ठाकुर गत जेठ २० गते रातिदेखि नै घरबाट हराइ रहेकी छन् भने माइती पक्षले उनको घरकाले नै केही गरेको आरोप लगाएको छ ।
जिल्लाकै पिपरा गाउँपालिका–६ रतौली माइती रहेको सुजिताकी आमा सुनिता पाण्डेय र दाजु जितेन्द्रले सुजिताको ज्यान लिएको आरोप लगाएका छन् । जितेन्द्रले बहिनीका देवर रुपेशले आफूलाई फोनमा बहिनीलाई मा रे को स्वीकार गरेको र मा रे र उनलाई भ्रमरपुरा गाउँको मनरहिया वनमा खा ल्डो मा गा डे को आरोप लगाए ।
प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले महिला हराएको जानकारी शुक्रबार मात्रै पाएको बताए । उनले महिला हराएको जानकारी पाउनासाथ अनौपचारिक रूपमा खोजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र केही मानिसलाई ल्याएर सोधपुछ पनि गरेको जानकारी दिए ।
महिलाका बारेमा स्थानीय बासी समेत सशंकित छन् । उनीहरुले पनि सुजिताकै परिवारमाथि शंका गरेका छन् । तर, यसबारे उनीहरुले औपचारिक रुपमा केही थाहा नभएको बताएका छन् । प्रहरी भने यस घटनामा अनुसन्धान सुरु भै रहेको जनाएको छ ।